Sambava: Leo kolikoly ireo mpitatitra manao zotra « Suburbaine »
vendredi, 22 février 2019 07:47
Nanao hetsika fitokonana izay narahina sakan-dalana teto Bekona Ambohimalaza ireo mpitatitra avy amin'ny koperativa rehetra mampitohy an’i Sambava renivohitra amin’ireo Kaominina manodidina toa an’Antsahalalina-Ambohimalaza ary Ambodivoara noho famelana ireo Taxi-ville miasa mitatitra mpandeha any amin'ny faritra iasan’izy ireo.
« Efa tsy tratra intsony ny ''versement'' 150.000 Ariary isan’andro fa zara raha mahazo 40.000 Ariary amin'izao noho ny hamaroan’ireo Taxi lasa manao ny Suburbaine », hoy ireo mpitatitra. « Tsy tonga tamin'izao hetsika izao izahay raha mba nisy nihaino satria efa betsaka ny fifanatonana natao tamin'ireo tompon'andraikitra nanomboka avy tamin'ny Ray aman-dreninay dia ny koperativa mpiahy, hatrany amin'ny mpitandro filaminana fa vao maika mahazo vahana ireo, sady mangina fotsiny manoloana ny taingim-be ataon'ireo Taxi ka maty antoka izahay mampidi-bola ara-dalana amin'ny kitam-bolam-panjakana », hoy hatrany ireo mpitatitra.
Nampahatsiahy ireo mpitatitra fa hatreho Ambarimiambana ihany ny famaritana ny Commune Urbaine Sambava, faritra tokony iasan’ny Taxi ; vao miala kely eo dia Antsahorana, misy ny sakana voalohany ataon’ny Polisy Monisipaly, ary mandingana kely tonga eo Ankorabe dia misy indray ny sakana ataon’ny Polisy Nasionaly nefa mahagaga fa mandeha ho azy ary jerem-potsiny fa inona ny antony ?